Asebenza njani amaqonga e-cryptocurrency? | Ezezimali
Ngaphakathi kwicandelo lotyalo-mali, kuthotho lwamaqonga orhwebo lwedijithali enziwe anikezela ukhetho lwe tyala imali kwizitokhwe nakwii-cryptocurrensets, kunye nakwizinto ezahlukeneyo ezisisiseko kwii-CFD (iikhontrakthi zomahluko). Yinkampani yeenkonzo zezezimali egunyazisiweyo kwaye ilawulwa yiKhomishini yeNtengiso yezoKhuseleko yamanye amazwe ehlabathi. Ukudalwa kwayo kutsha nje, kunye nokunyuka kweBitcoin kunye nezinye iimali ezibonakalayo. Ukubala kwinani elikhulu labasebenzisi, abanikwa ukhetho lwexeshana elifutshane lokufuna inzuzo ephezulu kwimisebenzi yabo.
Banenkqubo esebenza ngoomatshini bokufunda ubuchule bokusebenza obona njongo yabo iphambili kukufumana ukusebenza ngokugqibeleleyo nanini na. Njengoko zinikezelwe ujongano olunezinto ezintsha ngokwenene kwaye zinomdla kwangaxeshanye kwaye yenzelwe ukuba kutyalwe i-Intanethi kunye norhwebo. Kwelinye icala, la maqonga e-cryptocurrency kunye nemisebenzi yexesha elizayo yezezimali zibonakaliswa kukungazinzi.
Imakethi yemali ekhoyo ngoku ikuvumela ukuba utyale imali kule asethi ikhethekileyo. Apho unokufumana khona imbuyekezo ephezulu engafanelekanga kwezinye iimodeli kutyalo-mali oluqhelekileyo. Kufuphi kakhulu amanqanaba ayi-50% okanye nangaphezulu. Kodwa ngomngcipheko obaluleke kakhulu kwimisebenzi eyenziweyo ngenxa yokungazinzi okuphezulu okuveliswe kwizikhundla zabo. Akumangalisi ukuba imali eninzi inokulahleka kwaye ngale ndlela abatyali zimali abancinci nabaphakathi kufuneka babenoxanduva ngezenzo zabo
1 Amaqonga: zeziphi iimali?
2 Eyona ngxaki yakho inkulu: ukhuseleko
3 Izicelo zeselfowuni
4 Yintoni enokwenziwa?
6 Ukuphakamisa ukusebenza
7 Iindidi zezivumelwano
Amaqonga: zeziphi iimali?
Ukunikezelwa kwaba baqhubi ijolise phantse ngokukodwa kwiimali ezibonakalayo okanye ii-cryptocurrensets. Apho eyona ndima iphambili yokusebenza imelwe yi-bitcoin. Ngala maqonga ungathenga, uthengise, kodwa ngaphezulu kwako konke ukuqikelela kule klasi yeeasethi ezinemali ezintsha. Ngokubanzi kwimisebenzi yokurhweba besebenzisa ii-oscillations ezomeleleyo ezibonisa amaxabiso abo. Ngenxa yoko, kwimizuzu embalwa okanye kwiiyure, inzuzo enkulu inokuveliswa kwiintshukumo ezivulekileyo. Le yeyona nto inomtsalane kule klasi yamaqonga edijithali.
Kwelinye icala, kufuneka kugxininiswe ukuba ukuze kwenziwe i iidipozithi kunye notsalo lweemali Imali, zombini iimali ze-fiat kunye ne-virtual currencies ziyaxhaswa. Ngale ndlela, kufuneka kukhunjulwe ukuba uhlobo lwemali olusemthethweni luhlobo lwemali yedola, i-euro kunye ne-yen okanye eyona mali iphambili yamanye amazwe. Into ongayi kuyenza ngokusesikweni nabarhwebi ekuthengeni nasekuthengiseni izabelo kwiimarike zezabelo. ngeekhomishini ezihlala zikhuphisana ngakumbi kunesithembiso semveli, kunye nemida yokulamla ephakathi kwe-0,05% kunye ne-0,20% yemali etyalwe
Eyona ngxaki yakho inkulu: ukhuseleko
Eyona ngxaki inkulu anayo la maqonga otyalo mali kwii-cryptocurrensets kukuba zibonelela ngokhuseleko olukhulu kwinkxaso yabo yetekhnoloji. Kubaluleke kakhulu, ukuba uza kukhetha le modeli ingaqhelekanga, ukuba uye kumaqonga edigital ngokupheleleyo ikhuselekile kwaye ithembekile ukuze idatha yakho ingahambi kubantu besithathu. Ngapha koko, abanye abasebenzisi abanazo ezi ndlela zokhuselo kwaye banokudala ngaphezulu kwesingxaki esinye ngexesha elithile kutyalo-mali.
Ngelixa kwelinye icala, okungabalulekanga kangako kukuba la maqonga ezemali zilawulwa ngokufanelekileyo ngumbutho wesizwe okanye wamanye amazwe. Ukuze ube nesiqinisekiso esipheleleyo sokuba zonke izinto ozenzayo ziya kwenziwa ngokuchanekileyo kwaye akusayi kubakho luhlobo lwezehlo. Kuya kufuneka uqiniseke ukuba ezi nkampani ziyahambelana nezi ziqinisekiso kuba ukuba bekungenjalo, uya kuba sengxakini enkulu kwaye ke oko kungakubiza imali eninzi ukusukela ngoku. Ungalibali ukuba ufuna ukukhusela umdla wakho ukusukela ngoku.
Ukuthengisa le nkonzo kutyalo-mali, amaqonga edijithali aphuhlise usetyenziso olusebenzayo izixhobo zeteknoloji. Ukusuka apho kunokwenzeka khona ukuba usebenze ngokulula kakhulu ngeemali ezibonakalayo ngokuyilwa kwezinto ezintsha eziququzelela umsebenzi wabatyali mali abancinci nabaphakathi. Ukusuka nakweyiphi na indawo okanye indawo apho bakho aba bantu.
Kwelinye icala, abaqhubi be-cryptocurrency bakhona kakhulu kuthungelwano apho abasebenzisi banethuba lokungenisa iindaba ezikhutshwe ngamaqonga anezi mpawu. Njengokufunda nasiphi na isicwangciso sokurhweba ezona mali ziphambili zedijithali. Ukuba yenye yeendlela ezikhethiweyo zaba baqhubi bezemali. Ngecandelo lezentlalo elijolise kwi iprofayile echazwe kakuhle. Umsebenzisi omncinci, oqhele zonke iintlobo zezixhobo zedijithali kunye nomnqweno wokwenza igalelo lakhe lemali libe yinzuzo ngokukhawuleza okukhulu.
Ukusuka kula maqonga akwi-Intanethi ungathenga, uthengise okanye uqikelele kulo naluphi na uhlobo lwemali ebonakalayo kwaye ngakumbi kwi-bitcoin. Ayothusi into yokuba le mali yedatha iqhubeka nokuba ngumgangatho kolu hlobo lotyalo-mali olukhethekileyo. Apho imingcipheko yale misebenzi iphezulu kakhulu kunaleyo yeemveliso eziqhelekileyo zemali. Phakathi kwezinye izizathu kuba phantse yonke imali etyalomali inokulahleka. Ngamanqanaba okunyusa aphezulu kakhulu kuzo zonke iindawo zokujonga.
Ngelixa kwelinye icala, kwezinye iimeko ezithile imisebenzi yokurhweba ikwenziwe ukuba yenziwe izifundo ezininzi ezifanelekileyo. Umzekelo, igolide, isilivere, izinto ezingafunekiyo kunye nezinye iiasethi zemali. Ngokusebenza ngokuqikelela okwenziwe kwangolo suku lunye, umahluko wexesha phakathi kokuthenga kunye nokuthengisa iiodolo. Kukuphi okunye kokusebenza kweemarike zezabelo ezinobungozi obukhulu ngenxa yeempawu ezizodwa zolu didi lotyalo-mali olungelulo.
Ukusebenza kumaqonga emali ebonakalayo kwenziwa ngenkqubo yeedipozithi kunye nokurhoxiswa kwemali. Banokwenziwa ngokulandelela kabini. Kwelinye icala, ngokusebenzisa oko kubizwa ngokuba Iimali ze-fiat, apho iyuro nedola yaseMelika zidityanisiwe, phakathi kwezinye zezona zibalulekileyo. Kwaye kwelinye icala, ngeentlawulo ezenziwe ngeemali zedijithali ngokwazo. Ngeekhomishini ezihamba kwimida yokulamla phakathi kwe-0,10% kunye ne-0,30%. Ngeendlela ezamkelweyo zokuhlawula: amakhadi etyala okanye okuthenga, ukudluliselwa kwebhanki okanye iintlawulo zombane.
Enye into ekufuneka ithathelwe ingqalelo kukuba imisebenzi ye-cryptocurrency yenziwe ngokusemthethweni kuzo zonke iimeko ezikwi-intanethi. Ngeentshukumo eziqhutywa ngexesha lokwenyani kwezi asethi zemali ukuze ukurhweba ngemali kuthathwe inzuzo. Ngamaxabiso okwenyani athe kratya kunabasebenzisi abaqhelekileyo. Ngayiphi na imeko, yonke imisebenzi yenziwa ngokusesikweni kwizixhobo zobuchwephesha, kwifowuni ephathekayo, ithebhulethi okanye esinye isixhobo sezi mpawu. Apho imalunga nokwenza imisebenzi enenzondelelo ngokuqatha kwiasethi yemali ekhethwe ngabasebenzisi.
Onke amaqonga edijithali okurhweba ngeemali ezibonakalayo anikezela ngomgangatho kuzo zonke iimveliso zawo. Bacebisa malini? Inani lokuphakanyiswa kwaba bathengisi liyahluka ukusuka kwimveliso ukuya kwimveliso. Ukuphakanyiswa kunqunywe ngamanqanaba okuqala kunye nokugcinwa kwemida. La manqanaba achaza ubuncinci benkunzi onokuthi ube unayo kwiakhawunti yakho yokungena kunye nokugcina izikhundla. Ukunyanzelwa ayisiyokuphindaphinda esisigxina kodwa ubuncinci bemfuno eyimali.
Uthini umda wokuqala? Lixabiso elincinci leBitcoin okanye enye imali yedijithali ekufuneka uyibeke ukuze uvule indawo. Uthini umda wolondolozo? Kule meko, lixabiso elincinci leBitcoin ekufuneka uligcinile ukuze ugcine indawo evulekileyo. Ukuba ibhalansi yakho yemida kwiqonga lezemali ledijithali iwela ngezantsi kwale nqanaba, isikhundla sakho siya kuthathwa yinjini yokuhlala kwaye ke iya kulungiswa.
Zininzi kwaye enye yezona zibalulekileyo zibizwa ihlala ihleli Kwaye iyimveliso efana nekhontrakthi yemveli yekamva ngendlela ethengiswa ngayo, kodwa ayiphelelwa, ukuze ubambe isikhundla okoko ufuna. Izivumelwano ezingapheliyo zithengiswa njengendawo, zilandelela ngokusondeleyo kwi-Index Index.
Ngelixa ngokuchaseneyo, i ikontrakthi yekamva sisivumelwano sokuthenga okanye ukuthengisa urhwebo, imali, okanye esinye isixhobo ngexabiso elichazwe kwangaphambili ngexesha elithile kwixesha elizayo. Ezi ziikhontrakthi zomda opheleleyo ezinikezela ngendlela efanelekileyo yokuthatha inxaxheba kwirali yentengiso. Abatyalomali banokuba yi-UP kuphela ngexabiso elide, abanakuthengisa ngokufutshane. Kuphela ngumdali wentengiso yeqonga yeankile yeqonga onokuza ngokufutshane. Ixabiso lokuhlawula lixabiso apho isivumelwano sexesha elizayo sihlawulwa khona. Ukuthintela ubuqhetseba bamaxabiso, umndilili wabarhwebi ngaphezulu kwexesha elithile ngaphambi kokuba kuhlalwe kwaye eli xesha linokuhluka kwizixhobo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Asebenza njani amaqonga e-cryptocurrency?
UMateyu L sitsho
Molo, enkosi kakhulu ngolwazi. Ndiqala kwihlabathi lee-cryptocurrensets kwaye ndifunda kakhulu kuba ndingathanda ukuqala ukwenza imali kodwa andazi ukuba kuphi. Ndijonge kumaqonga kwaye ndikwazile ukufumana ezinye endizifumana zinomdla njenge-Cryptoseñales, kodwa andazi ukuba ndiyathemba na.
Ngaba ukhona umntu owake wayizama kwaye ungandixelela ukuba injani okanye ikhona enye into oyibona ngcono?
Phendula kuMateo L